म मुस्कुराउन चाहान्छु, मेरो ओठको मस्कान फर्काई दिनुहोस् – मुस्कान खातुन (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/म मुस्कुराउन चाहान्छु, मेरो ओठको मस्कान फर्काई दिनुहोस् – मुस्कान खातुन (भिडियो)
रुपनी जि.एम – “म मेरो ओठको मुस्कान गुमाउन चाहाँदिन । म अस्पतालको बेडमा छटपटाई रहँदा तपाँईहरु सबैले मलाई हिम्मत नहार्न दिएको सुझाव कहाँ बिर्सिएकी छु र ? तपाँईहरुको साथ र सहयोगले नै आज मेरो ओठमा हराईसकेको मुस्कान फर्किएको छ । मलाई आज पनि तपाँईहरुको त्यही माया, साथ र सहयोगको खाँचो परेको छ । मेरो साथमा त हुनुहुन्छ नि हैन ?” मर्म स्पर्शि आशयमा आफ्नो भनाईलाई भिडियोमा कैद गरेकी छन् फेरी एकपटक मुस्कान खातुनले ।वि.सं. २०७६ भाद्र २० गते उनी माथि दुई जना केटाहरुले ए’सिड आ;क्रमणमा गरेका थिए । त्यतिबेला उनी जम्मा १४ वर्षकी थिईन् । १४ वर्षकी मुस्कान कक्षा ९ मा पढ्दै थिईन् । जतिबेला उनीमाथि ए’सिड प्र;हार गरियो त्यो समयमा मुस्कान स्कूलबाट घर फर्कदैं थिईन् ।
आफ्नै सुरमा घर पुग्ने हतारमा हिंडेकी मुस्कानलाई बाटोमा दुईवटा केटाहरुले पानी पिउ भनि दिएका थिए । ती केटाहरु मुस्कानले चिनेका थिएनन् त्यसैले उनले नचिनेको मान्छेले दिएको नखाने भनेर पानी खान अस्विकार गरेकी थिईन् । आफुहरुले भनेको नमानेपछि ती दुवैले नै मुस्कानको अनुहारमा ए’सिड छर्किएर भागेका थिए ।जब मुस्कानको अनुहारमा त्यही बोतलको पानी प¥यो तब बल्ल उनलाई थाहा भएछ कि जुन बोतलको पानी पिउन भनिएको थियो त्यो बोतलको पानी त पानी नभई ए’सिड पो रहेछ । भाग्यबस त्यो ए’सिड अन्य ए’सिड पिडितहरुको तुलनामा मुस्कानको रुपै बिग्रने गरी र पुरै शरिरै भरि पर्न पाएन ।
ए’सिडले उनको सबै शरीर र रुपलाई कुरुप त गराउन पाएन तर उनको अनुहारको केही भाग र दाहीने हातमा परेको ए’सिडको जलनले मुस्कानलाई भने अहिले सम्म नै भित्रभित्रै जलाई रहेको छ । बाहीर सबैसंग उनी हाँस्छिन् । उनी बोल्छिन् । उनी साथीहरुसंग खेल्छिन् पनि तर जब भाद्र २० गते उनको जीवनमा सोच्दै नसोचेको घटना भयो त्यो घटनालाई सम्झिन मात्रै भने उनी केवल भित्रभित्र जलिरहेकी हुन्छिन् । मनभित्रको पिडामा मुर्छा पर्नुको अनुभुति केवल मुस्कानलाई मात्र थाहा छ ।
मनभित्रको त्यही डरलाई उनले एउटा भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । भिडियोमा उनले सबैजनालाई आफुलाई सुरक्षाको अनुभुति गराउन अपिल गरेकी छन् । आफुलाई ए’सिड प्र’हार गर्ने दुईजना पक्राउ परेको तर ती दुई जना व्यक्ति मध्ये एकजना बाहिर निस्किएकोले मुस्कानको मनमा फेरी एकप्रकारको डर उत्पन्न भएको छ ।
उनले रेर्कड गरेको उक्त भिडियोमा मुस्कानको आवाजमा डरको भावलाई प्रष्टै सुन्न सकिन्छ । उतिबेलाको पिडालाई त डक्टर, साथीभाई, देशविदेशमा रहेका सबै नेपालीले र आफ्ना आफन्तको साथ र हौसलाले मलहम लगाएर निको पा¥यो । तर प्रक्राउ परेको पिडित बाहिरिएको खबरले उनीमा जति त्रास उत्पन्न भएको छ त्यसको कल्पनासम्म हामीले गर्न सक्दैनौं ।
आज त्यही अपराधी खुलेआम निस्किएको खबरले मुस्कानको मनमा डर उत्पन्न गराएको छ । त्यो एउटा यस्तो डर हो जस्ले उनको बालापनलाई खोसी दिएको छ । खितखिताउने हाँसोले गाउँघरको गल्लीहरुलाई गुन्जयमान गराउनुको साटो उनको हाँसो लुटि दिएको छ । साथीभाईहरुसंग खेल्ने उफ्रने उमेरमा १४÷१५ वर्षकी कलिलो मुस्कानलाई डर र त्रासले बन्दी बनएको छ ।
मुस्कान सधैं नाम जस्तै भएर मुस्कुराउँदै बाँच्न चाहान्छिन् । हाँसखेल गर्दै आफ्ना साथी भाईसंग रमाउन चाहान्छिन् । अरुले जस्तै एउटा स्वतन्त्र जिन्दगी जीउन चाहान्छिन् । तर बदलाको भावले फेरी अर्को नसोचेको घटना घटाउँछ कि भन्ने डरले उनलाई पलपल सताई रहेको छ । उनी भित्रको डरले उनलाई स्वतन्त्र हुनबाट कसरी रोकेको छ भन्ने कुरा उनले रेर्कड गरेको भिडियोमा मज्जाले देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
मस्कानले गरेको अनुरोधलाई सबैले आत्मासाथ गरौं । र हामी सबैले आ–आफ्नो घरमा मुस्कान जस्तै सधैंभरी मुस्कुराउन चाहाने सानासाना नानीहरु छन् भन्ने कुरालाई पनि मनन् गरौं । एउटा अपराधीको डरले, ध’म्किले र अकल्पनीय घटनाले ती अबोध बालीकाहरुको पुरै जिन्दगीलाई फल्न र फुल्न अघि नै मुर्झाउन सक्दैन भन्ने कुराको अनुभुति गराउन हामी एकजुट बनौं । जुन सुरक्षाको अनुभुति उनले गर्न चाहिरहेकी छन् त्यो उनलाई गराउनमा हामीले ऐकेबद्धता जनाउँ ।
कति पिडा भएको हुँदो हो मुस्कानलाई जन्म दिएकी ती आमालाई एकचोटी उनको ठाउँमा हामीले आफुलाई राखेर हेरौं त ? के त्यस्को अनुभुति यति सजिलै हामीले गर्न सक्छौं ? जति सजिलै मुस्कानको जीवनमा घटेको घटनालाई हामीले देखेका छौं । हेरेका छौं । सुनेका छौं । लेखेका छौं र पढेका पनि छौं । के त्यो तपाँई हाम्रै घरभित्रको छोरीचेलीमा घट्यो भने हामीले त्यति नै सजिलै अरुलाई सुनाउन सक्छौं ?
सायद हामीमा त्यो विशाल मुटु छैन होला । की एउटा अपराधीको अपराधले आफ्नो छोरीको सुन्दर रुपलाई कुरुप भएको हरेकपल देखि रहनु पर्ने । कति माहान ती आमा जस्ले यस्ता कुराहरुसंग डटेर सामना गर्दै मुस्कानलाई जिन्दगीमा अगाडी बढ्न हिम्मत दिएकी छिन् । त्यो बाबुको मनलाई एकचोटी नियालेर हेर्ने प्रयास गरौं । कति पोल्दो हो आफ्नो फुल जस्ती छोरीको एसिडले ज’लेको अनुहार साँझ बिहान देख्नु पर्दा । र पनि उचित स्याहार र मायाले सुम्सुम्याउँदै छोरीको मनोबललाई उच्च बनाउनमा साथ दिईरहेका छन् ।
मुस्कान मात्र हैन नेपालमा मुस्कान जस्तै कयौं बालिकाहरु एसिड प्रहारबाट बिना गल्ति पिडित बनेका छन् । उनीहरुले आफ्नै आखाँ अगाडी आफ्नो जिन्दगीको सुन्दर संसारलाई फुल्नु अघि नै ओलाएको अनुभुति गरेका छन् । त्यस्ता अबोध बालिकाहरुकालागि घरपरिवार, साथीभाई, छिमेकी, आफन्त र सिंगो नेपाली समाज मात्रै हैन नेपाल सरकारले पनि उज्जवल भविष्य र सुन्दर जीवनको अनुभुति गराउन सक्न्ु पर्छ ।
यस्ता आपराधीक घटनामा सक्रिय हुने जो कोहीलाई पनि नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्दै सशक्त कारवाही गर्नु नै पर्छ । ताकी त्यस उप्रान्त त्यस्ता अपराधिहरुमा ए’सिड प्र’हार गर्ने त के कुनैपनि नानीहरुको छायाँसम्म टेक्ने आँट नआएकोहोस् । र नेपालका प्रत्यक बालबालिकाहरु र छोरीचेलीहरुलाई आफुहरु जाहाँ गएपनि सुरक्षित छौं भन्ने महसुस हुन सकेकोहोस् । (भिडियो)
संक्रमितको उपचार प्रक्रियामा सहभागी हुनेको मृत्यु भएमा सरकारले ५० लाख दिने
भर्खरै नेपालमा यति ठूलो, भूकम्पको धक्का महशुस
रुकुम- जाजरकोट: सुष्मा मल्लको घरमै पुग्दा लखेटी लखेटी भेरी नदि पुराउनेहरु गाउँले हरुले दिए अचम्मको बयान, घाटनाले लिने भयो अर्कै मोड (भिडियोसहित)
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु